लेखककी स्वास्नी - SATAKO SAHITYA
लेखक : प्रगति राई
बितरक : याम्बुरी बुक प्वाइन्ट
झलमल्ल बत्ती । चुरोटको धुवाँ बुङ्बुङ्ति कोठाभरि । झ्यालहरू ट्यापटुप बन्द थिए । म ब्युँझेर एकछिन अलमलमा परेँ । आँखा एक फन्को घुमाउँदा रङ्ग उड्नै लागेको गोलो भित्तेघडीमा मेरा आँखाहरू अड्किए। बिहानको साढे दुई भएको थिएछ । भुइँमा सुशान्त सिँगान तान्दै लेखिबसेको थियो । स्ट्रेको डिलदेखि त्यति नै बेला चुरोटको ठुटो लडिखस्यो टेबुलमा । सुशान्तले वास्तै गरेन । मैले पनि सयौंपल्ट डढेर भूढो भैसकेको टेबुललाई किन वास्ता गर्नु र?
मैले खाटबाटै तन्किएर झ्याल खोलें । सिरकको खोल थोरै तानेर नाक बन्द गरें । असोजको बिहानी बतास सरर भित्र प्रवेश गर्‍यो ।
सुशान्त खाटमा आयो । मेरो गोडापट्टि आधा सिरक ओढेर कछुवाजस्तो मुन्टोमात्रै बाहिर निकाल्यो । भुवादार टोपी लगाएको टाउको सिलिङ्तिर के खोजेर हो कुन्नि फननन घुमायो । मलाई एक्कसी हाँसो उठ्यो । मेरो हँसाइले तर्सेर ऊ पछि फर्क्यो ।
'निद्रा पुग्यो ?'
'काँ पुग्नु? आधा रातमा डिस्टर्व गरेर', कोल्टो फेरेर फेरि सुत्नलाई मैले सिरक तानें । सुशान्तले फेरि उतै तान्यो ।
म घस्रेर ऊ भएतिर सर्दा मेरो गोडा उसको पिठ्यूँमा परेछ । एक मुड्की हान्यो सिरकमाथि । म कुक्रुक्कै परें ।
'आधा रातमा नउठे के हुन्छ नि तिम्लाई?' मैले सिरकभित्रैबाट सोधें।
'आधा रातमै बत्ति आउँछ त मैले के गर्नु?'
'दिनभरिको उज्यालोमा लेखे भैगो नि। तिम्रो बित्दो के छ र?' मैले अलि बाङ्गो कुरा गरें । बाझ्न मन नलागे पनि हाम्रो वार्ता सधैं बाङ्गो भैजान्छ। गएको फागुनमा सुशान्तको जन्मदिनको उपहारस्वरुप 'यो वर्षभरि तिमीसँग झगडा गर्दिनँ' भनेर बाचा गरेकी थिएँ।
वाचा सम्झिएर उसको मन फर्काउन म उठें । उसको छेवैमा बसें । उसले आफूलाई लेख्न्नमै व्यस्त बनायो ।
'आज कति पेज लेखेको?'
'सात पेज लेखिएछ', उसले लामो सास तान्यो र टक्रक्क पारेर कलमलाई टेबुलमाथि राख्यो ।
'के लेखेको सात पेज?'
'हँ?' मैले सुशान्तको अनुहारमा कोल्टो परेर हेरें ।
'ख्वँईय' गरेर ऊ एकफेर हाँस्यो ।
भन्यो, 'उपन्यास नि हौ"
'त्यो त हो कि, अहिले चाहिँ के के लेख्यौ त?'
'ल सुन!' सुशान्तले भर्खर लेखिएका पानाहरू पल्टायो र पढ्न सुरु गर्‍यो ....!
प्रभाकरसँग हामी शिक्षण अस्पताल पुग्यौं । उसैले मानिसहरूको भीडभित्र तानेर एउटा कोठामा पुर्‍यायो । बिरामीलाई पुरै तन्नाले ढाकिएको थियो । कुरुवा दुईजना महिला थिए । ती महिलाहरूलाई प्रभाकरले नमस्कार गर्‍यो । मैले पनि सँगसँगै गरें ।
'अहिले कस्तो छ बिरामीलाई?' प्रभाकरले ती महिलाहरूलाई सोध्यो ।
एकजाना अलि पातली टि-सर्ट र पाइन्ट लगाएकीले भनिन्,'अहिले घाउ अलि थाकेको छ। एसिडले अनुहार पुरै खा'को छ।'
अर्की अलि मोटी महिलाले कुर्ता-सलवार लगाएकी थिईन्। अर्यमूलकी ती महिलाले मतिर देखाउँदै प्रभाकरलाई सोधिन्,'यी नानी चाहिँ को हुन् नि भदा?'
'साथी हो फुपु।' प्रभाकरले भन्यो ।
म के के न सोधौंला भने गएको थिएँ, त्यहाँ पुगेर अबोला भएँ ।
'त्यो लोग्ने भनाउँदा चोर चाहिँ कता छ नि?' प्रभाकारले सोध्यो ।
'भागेर इण्डिया गा'छ रे।सासुससुरा चाहिँ हिरासतमा', मोटी महिलाले भनिन्।
'तिनलाई के कारवाही हुनेवाला छ त?' मैले सोधें
मोटी महिलाले भनिन्,'हद भए प्रहरीमा थुन्ला । अरु त के हुन सक्छ र? यो रुप, यो अनुहार क्षतिपूर्तिले बन्ने हो र थोरै?'
पाइन्ट लगाएकी पातलीले मेरै छेउमा बस्दै भनिन्,' पखोस्, त्यो पातालमुनि पसे पनि खोजेर त्यसको अनुहार यसैगरी सल्काउँछु ।'
'उपचारमा खर्च कति लगेको छ, कहाँबाट आउँदैछ?' मैले प्रभाकरलाई सोधेजसो गरें।
बिरामीले अनुहार नदेखाइकन हात जोडेर भनिन्', तपाईंहरू मेरो लागि भगवाण हुनुहुन्छ । म बाँच्न चाहन्छु । मेरी दुईटी छोरीका लागि मैले बाँच्नुपर्छ । मलाई बचाउनुस्..'!
अहिले सम्म "साताको साहित्य"लाई ८६८५३७ पटक पढिएको छ ।